ESI EWEPU MKPỌCHI IHUENYO NA WINDOWS 7 - WINDOWS - 2019
Gbanyụọ windo mkpọchi na Windows 7
Ihe ọ bụla onye ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ na kọmpụta ma na-echekwa faịlụ ndị ọ chọrọ iji zoo anya. Nke a dị mma maka ndị ọrụ ụlọ ọrụ na ndị nne na nna nwere ụmụaka. Iji mechie ohere nke mpụga na akaụntụ ha, ndị mmepe nke Windows 7 atụwo aro na-eji mgbanaka mkpọchi - n'agbanyeghị na ọ dị mfe, ọ bụ ihe mgbochi siri ike megide ohere na-enweghị ikike.
Ma gịnị ka ndị mmadụ, ndị bụ naanị ọrụ nke otu kọmputa, na-eme, ma na-agbanye na mgbidi mkpọchi n'oge obere ego downtime na-ewe oge dị ukwuu? Na mgbakwunye, ọ na-egosi oge ọ bụla ị na-agbanye kọmputa ahụ, ọ bụrụgodị na edeghị paswọọdụ, nke na-ewe oge dị oké ọnụ ahịa n'oge onye ọrụ ga-ebularịrị.
Na-agbanyụ ngosipụta nke mkpọchi mkpọchi na Windows 7
E nwere ọtụtụ ụzọ iji hazie ngosipụta nke ihe ngebichi mkpọchi - ha dabere n'otú e si arụ ọrụ ya.
Usoro 1: Gbanyụọ nchekwa ihuenyo na "Nhazi"
Ọ bụrụ na mgbe oge ụfọdụ na-abaghị uru na kọmputa gị, nchekwa ihuenyo na-agbanye, ma mgbe ị pupu ya, a kpaliri ịbanye paswọọdụ maka ọrụ ọzọ - nke a bụ ikpe gị.
Na ebe efu nke desktọọpụ, pịa bọtịnụ òké aka, họrọ ihe site na menu ndetu "Nhazi".
Na window nke meghere "Nhazi" na pịa nri aka nri "Nchedo".
Na windo "Nchekwa Nhọrọ ihuenyo" anyị ga-enwe mmasị na otu akọrọ akpọ "Malite na ihuenyo nbanye". Ọ bụrụ na ọ na-arụ ọrụ, mgbe ọ bụla nkwụsịtụ nke screensaver anyị ga-ahụ ihuenyo mkpọchi ọrụ. A ghaghị iwepu ya, dozie bọtịnụ ahụ "Tinye" na n'ikpeazụ gosi mgbanwe site na ịpị "OK".
Ugbu a mgbe ị pupupụrụ nchekwa nchekwa ahụ, onye ọrụ ahụ ga-abanye na desktọọpụ ozugbo. Ịkwesighi ịmalitegharịa kọmputa ahụ, a ga-etinye mgbanwe ahụ n'otu ntabi anya. Rịba ama na ọnọdụ a ga-adị mkpa maka ugboro ugboro maka isiokwu ọ bụla na onye ọrụ, ma ọ bụrụ na ọtụtụ n'ime ha nwere nhazi ndị dị otú ahụ.
Usoro 2: Gbanyụọ nchekwa ihuenyo mgbe ịgbanyere kọmputa
Nke a bụ ọnọdụ zuru ụwa ọnụ, ọ dị mma maka usoro dum, ya mere ọ na-ahazi ya otu ugboro.
Na keyboard, pịa bọtịnụ n'otu oge "Merie" ma "R". Na ebe nchọta nke windo nke gosipụtara, tinye iwu ahụikewee pịa "Tinye".
Na windo nke meghere, wepụ akara akara na ihe ahụ "Aha njirimara na paswọọdụ" ma pịgharịa bọtịnụ ahụ "Tinye".
Na windo nke gosipụtara, anyị na-ahụ ihe a chọrọ iji tinye paswọọdụ nke onye ọrụ ugbu a (ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ebe achọrọ nbanye akpaka mgbe gbanwere kọmputa). Tinye paswọọdụ wee pịa "OK".
Na windo nke abụọ, na-adịgide n'azụ, pịakwa bọtịnụ ahụ "OK".
Degharịa kọmputa. Ugbu a mgbe ị na-agbanye usoro ahụ ga-abanye paswọọdụ nke akọwapụtara na mbụ, onye ọrụ ga-amalite na-ebugharị na-akpaghị aka
Mgbe emechara arụ ọrụ, igodo mkpọchi ga-apụta nanị na ọnụọgụ abụọ - iji nchikota mkpọchi na-arụ ọrụ "Merie"ma "L" ma ọ bụ site na menu Malite, yana mgbanwe site na interface nke onye ọrụ na onye ọzọ.
Ịgbanye windo mkpọchi bụ ihe dị mma maka ndị ọrụ kọmputa dị n'otu na-achọ ịzọpụta oge mgbe ha na-agbanye kọmputa ma pụọ ​​na nchekwa ihuenyo.